संकटको समयमा पनि विनोद चौधरीको दादागिरी, सरकारीकोषमा रकम जम्मा नगर्न लविङ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
संकटको समयमा पनि विनोद चौधरीको दादागिरी, सरकारीकोषमा रकम जम्मा नगर्न लविङ
प्रकाशित मिति १४ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०८:११ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं। देश कोरोेना भाइरसको बिरुद्ध लडिरहेको बेला चाौधरी ग्रुुुुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीभने सरकारको आह्वान गरेको सहयोगका विरूद्वमा लागेको सूचना प्राप्त भएको छ । कांग्रेसका सांसद तथा अर्वपति ब्यापारी चौधरी सरकारले स्थापना गरेको कोरोना बिरुद्धको राहत कोषमा पैसा नदिन लविङ गर्दै खुलेआम सरकारकोबिरुद्धमा खटिएका छन ।
चौधरीले आजको आवश्यकता पैसा नभई उपकरण रहेको भन्दै सवै बैंक र ब्यापारी समुदायलाई सरकारी कोषमा रकम जम्मा नगर्न खुल्ला दवाव दिदै आएका छन् । ग्लोवल आइएमइका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पनि सरकारी कोषमा एक करोड दिइसकेका छन , जवकी सरकारी कोषमा चौधरी सांसद रहेकै दल नेपाली कांग्रेसले ५० लाख जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने कांग्रेसकै सांसद दिब्यमणि राजभण्डारीले सवैभन्दा पहिला सरकारी कोषमा ५ लाख ब्यक्तिगत रुपमा जम्मा गरेका छन । । चौधरीले भने सरकारको कोषमा पैसा जम्मा गर्ने होइन भन्दै अभियान चलाएका हुन ।
सरकारले कोरोनाबिरुद्ध कोष खडा गरेपछि उद्योगी, ब्यवसायी र बैंकहरुले स्वतःस्फुर्त रुपमा रकम जम्मा गर्न लागेका थिए । यही क्रममा चौधरी समुहकै बशन्त चौधरीले १ करोड रकम सहयोगको घोषणा गरेका छन । तर त्यसलगत्तै बिनोद चौधरीले मिडियामा अन्तरवार्ता दिँदै पैसा जम्मा नगर्न भनेका हुन । कांग्रेस सांसद बिनोद चौधरीले भने,, ‘आजको आवश्यकता भनेको पैसा होइन, यी उपकरणको आपूर्ति हो। संक्रमित बिरामी उपचारको ठूलो अभिभारा बोकेका स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा हो।’
सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्न नहुने कारण देखाउँदै चौधरीले मिडियामा भनेका छन । चौधरीले केही दिनभित्र चौधरी फाउन्डेसन देशभरिका सबै संवेदनशील स्थानमा पिपिईलगायत अन्य अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने लक्ष्यसाथ अगाडि बढिरहेको घोषणासमेत गरेका थिए । जवकी आफ्नै अस्पताल नर्भिकमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको उपचार गरेका छैनन । कोरोनाका लागि आवश्यक सामग्री अन्य अस्पतालमा उपलब्ध गराउने भन्दै कुर्लेका चौधरीले आफ्नै अस्पताल नर्भिकमा किन दिएनन ? यो प्रश्नले नै चौधरीको बदमासीलाई छताछुल्ल पारेको छ ।
नेपाली कांग्रेसकै एक केन्द्रीय सदस्य सांसद चौधरीको यो अपराध क्षमा दिन योग्य नहरेको बताए । सरकारले देशर जनताको सुरक्षार्थ चालेको कदमलाई चौधरीले खुलेयाम असहयोग गर्दै, बिरुद्धमा लाग्ने काम देशबिरुद्धको अपराध भएको ती नेताको भनाई छ । ‘सरकारी कोषमा रकम जम्मा नगर्न चौधरीले जुन भमिका खेले, यो संकटको बेला देश असफल होस भन्ने नियतका साथ गरिएको छ, अहिले सवैभन्दा ठुलो बदमासका रुपमा बिनोद चौधरी नै देखिएका छन,’ ती सांसदको भनाई छ । उनले चौधरीले कांग्रेसकै निर्णयबिरुद्धसमेत उभिएर आफू नेपालको हित चाहने ब्यक्ति नरहेको प्रमाणित गरेको दावी गरेको समाचार पत्रपत्रिाहरुमा छापिन थालेका छन । कांग्रेसका ती नेताले भने । उनका अनुसार केही नेताहरुले चौधरीको यस बिषयमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग उजुरीसमेत गरिसकेका छन ।
‘कांग्रेसको रवैयाले भएको करिअर पनि सबै ध्वस्त’ !
काठमाडौं । हुन त कांग्रेसले कसैलाई पनि आशावादी बनाउन सकेको छैन । उसको नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर सबैतिर निराशा नै…
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा लामो समयपछि अनुशासन समिति गठन भएको छ । लामो रस्साकसीका बीच सर्तसहित अनुशासन समिति गठन…
हिमपातका कारण कर्णाली राजमार्ग २ हप्तादेखि बन्द, मुगु र जुम्लाको जनजीवन प्रभावित
मुगु । हिमपातले दुई हप्तादेखि बन्द कर्णाली लोकमार्ग अझै खुलेको छैन । हिमाली जिल्ला जिम्ला र मुगुलाई जोड्ने कर्णाली…
नेकपाले बोलायाे आकस्मिक बैठक
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको आकास्मिक बैठक अाज बस्दै छ।
बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा विहान…
इक्यान अध्यक्षमा विष्णुहरि पाण्डे निर्वाचित, महासचिवमा शेषराज भट्टराई
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को अध्यक्षमा विष्णुहरि पाण्डे निर्वाचित भएका छन् । शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा पाण्डेले सरोजकुमार…
वाण्ज्यि विभागमा दर्ता नै नभएको कम्पनीबाट कोरोना ‘र्‍यापिड टेस्टिङ किट’ टेण्डरको खुलासा 14 views